FarmBot Genesi: Vhura-Chitubu mumunda wako wemba | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida gadheni uye urikufunga zvekurima yako wega gadheni kumba, iwe zvirokwazvo uchada kupfeka yako inogadzira sutu uye utange kushanda neiyi DIY chirongwa. Iyo kit yauinayo pamberi pemeso ako inonzi FarmBot Genesi, uye yakavakirwa pane mamwe akavhurwa sosi matekinoroji, iri nhau huru.
Sezvaunoziva, kune akawanda marobhoti uye marobhoti kits akavakirwa pa yakavhurika-sosi matekinoroji, zvese software uye Hardware, uye kunyangwe neLinux sepakati axis. Zvakanaka, chirongwa ichi ndechimwe cheavo. FarmBot ine mutengo wakakwira, asi iwe unowana iyo izere ecosystem yebindu rako kana otomatiki gadheni iyo iwe yauchazorora nayo kuti ubve mune tsika uye maunopedza maawa ...
Iyi otomatiki yekudiridza system ine sarudzo dzakawanda dziripo zvichibva paLinux uye inozivikanwa Raspberry Pi SBC bhodhi. Asi iyo FarmBot Genesis kit inoenda nhanho dzinoenderera mberi kupfuura mamwe akafanana makiti. mabvazuva chaiyo yekurima robhoti Iyo inoshandisa hunyanzvi hweCCC uye inobvumidzawo mamwe mabasa kuti aitwe pane iyo nyika yainovhara, senge kudyara mbeu, weeding, fetiraiza, nezvimwe.
Zvakare, iyo yakavakirwa paRaspberry Pi 3 uye bhodhi ine arduino microcontroller iine mana DRV8825 inodzora inodzora nayo iyo marobhoti zvinhu zvinofamba pamusoro pebindu kana munda wemichero. Irobhoti rakagadzirwa neArc riine musoro wekusimudzira rinogona kutamiswa richimiswa kusvika makumi maviri emamirimita ekurima, unova munda wakakura chaizvo.
Iwe unogona zvakare kushandisa yakasarudzika zvishongedzo, kusanganisira ma sensors uye zvimwe zvishandiso. Uye nekutonga kwayo unogona kushandisa webhu yakavakirwa software saka unogona kuzvibata kubva chero kwaunoda. Chishamiso kune vanoda gadheni uye zvirimwa ...
Rumwe ruzivo kana tenga iyo FarmBot Genesis kit - Saiti yepamutemo yeprojekti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » FarmBot Genesisi: Vhura-Chitubu mumunda wako
Manjaro 21.1.1 (2021-08-27) inosvika senge Pahvo yekutanga poindi inogadziridza neshanduko diki